UStallman ukhulumile wawavuma amaphutha futhi wachaza ukungaqondi | Kusuka kuLinux
UStallman ukhulumile wawavuma amaphutha futhi wachaza ukungaqondi
URichard Stallman uvumile ukuthi wenze amaphutha azisolayo ngawo Ngikhuthaze ukuthi ungathwali ukunganeliseki ngezenzo zakho kwiFree Software FoundatioU-ny wazama ukuchaza izizathu zokuziphatha kwakhe.
Ngokusho kwakhe, kusukela ebuntwaneni, wayengakwazi ukuqonda izinkomba ezicashile lapho abanye abantu basabela khona. UStallman uyavuma ukuthi akazange abone ngokushesha ukuthi isifiso sakhe sokuqondile nokuthembeka ezitatimendeni zakhe sidala ukusabela okungekuhle kwabanye abantu, kubangela ukuphazamiseka futhi kungahle kucasule nomuntu.
Kodwa lokhu kwakungukungazi nje, hhayi isifiso sangamabomu sokukhubekisa abanyenjengoba uStallman asho ukuthi kwesinye isikhathi wayehluleka ukuzibamba futhi aswele amakhono afanele okuxhumana ukuze akwazi ukubhekana naye.
Ngokuhamba kwesikhathi, wazuza ulwazi oludingekayo futhi waqala ukufunda ukuthambisa ukuqonda kwakhe. kwezokuxhumana, ikakhulukazi lapho abantu bemtshela ukuthi kukhona okubi akwenzile lapho uStallman azama khona ukufunda ukubona izikhathi ezishelelayo futhi alwele ukuba ngcono kwezokuxhumana futhi angenzi abantu bangakhululeki.
UStallman tUbuye wacacisa nemibono yakhe ngoMinsky no-Epstein, abaqondwa kahle abanye njengoba ebheka u-Epstein njengesigebengu okufanele ajeziswe futhi washaqeka lapho ezwa ukuthi isenzo sakhe sokuvikela uMarvin Minsky sibonwa njengesivikela isenzo sika-Epstein.
UStallman wazama ukuvikela uMinsky, owayengazi okuningi, ngemuva kokuthi othile ecabange ukuthi unecala njengo-Epstein. Ukumangalelwa okungalungile kwamthukuthelisa futhi kwamthukuthelisa uStallman, futhi washesha ukuvikela uMinsky, njengoba bengingenza nganoma yimuphi omunye umuntu.
UStallman ukholelwa ukuthi wayeqinisile uma ekhuluma ngokusolwa kukaMinsky ngokungafanele, kodwa iphutha lakhe kwaba ukuthi wehluleka ukunaka ukuthi ingxoxo ingabonakala esimweni sokungabi nabulungisa kuka-Epstein kwabesifazane.
Ngesikhathi esifanayo, i-STR Foundation ichaze izizathu zokubuyela kukaStallman ebhodini labaqondisi. Amalungu ebhodi namalungu avotayo kuthiwa akuvumile ukubuya kukaStallman ngemuva kwezinyanga zokuxoxisana kahle. Isinqumo siqhutshwe ukuqonda okukhulu kukaStallman kwezobuchwepheshe, kwezomthetho nangokomlando kusoftware yamahhala.
Isisekelo I-FOSS yayintula ukuhlakanipha nokuzwela kukaStallman ngokuthi ubuchwepheshe bunamthelela muni ekuqhubekeni nasekunciphiseni amalungelo ayisisekelo abantu. Ukuxhumana okuningiliziwe kukaStallman, ukukhuluma kahle, indlela yefilosofi, kanye nokukholelwa ekulungiseni imibono yesoftware yomthombo ovulekile nakho kuyashiwo.
UStallman uvumile ukuthi wenze amaphutha futhi uyazisola ngakwenzileikakhulukazi ukuthi izimo ezimbi ngaye zathinta kabi idumela le-STR Foundation. Amanye amalungu ebhodi yabaqondisi be-STR Foundation ahlala engaphathekile kahle ngesitayela sokuxhumana sikaStallman, kepha iningi likholelwa ukuthi indlela yakhe yokuziphatha isinciphile.
Iphutha elikhulu le-FOSS Foundation kwaba ukungabikho kokulungiselela okwanele ngokumenyezelwa kokubuya kukaStallman, njengoba iSisekelo singazange siyibeke yonke imihlahlandlela ngesikhathi futhi singabonisananga nabasebenzi, futhi asazisanga nabahleli bengqungquthela yeLibrePlanet, abafunda ngokubuya kukaStallman kuphela ngesikhathi ekhuluma.
Kuyaziwa ukuthi uStallman akaholi kwi-STR Fund (uyivolontiya), futhi ebhodini labaqondisi wenza imisebenzi efanayo nabanye ababambiqhaza, futhi ubophezelekile ukulandela imithetho yenhlangano, kubandakanya lezo eziphathelene nokungamukeleki. yokungqubuzana kwezintshisekelo nokuhlukunyezwa ngokocansi. Lokho kusho ukuthi imibono kaStallman ibalulekile ekuqhubekiseleni phambili umsebenzi weFOSS Foundation kanye nokubhekana nezinselelo ezibhekene nenhlangano yeFOSS.
Ngaphezu kwalokho, kungaphawulwa ukuthi ibhodi labaqondisi bephrojekthi ye-openSUSE imemezele ukunqanyulwa koxhaso lwaleminye imicimbi nezinhlangano ezihambisana ne-Open Source Foundation.
Khonamanjalo, isibalo salabo abasayine le ncwadi bexhasa uStallman sithole amasiginesha angama-6257, kanti le ncwadi ebhekene noStallman isayinwe ngabantu abangu-3012.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » UStallman ukhulumile wawavuma amaphutha futhi wachaza ukungaqondi
I-Open-Source FPGA Foundation ubambiswano olusha lwentuthuko ehlanganyelwe yezixazululo ezivulekile zehadiwe nesoftware